कुनै पनि उमेर मा महिला एक महिला छ। लेट वितरण - र अक्सर एक बच्चा राम्रो निराशाजनक उपाय मा महिलाहरु provokes छ इच्छा। यस लेखमा म starorodyaschimi आमा जस्ता शब्दहरू बारे कुरा गर्न चाहन्छु। जसले उमेर, के लेट गर्भावस्था को खतराहरू छन् के हो, तिनीहरूले छन्।
पछिल्लो एक बिट
के शब्द "starorodyaschimi" बारे भने गर्न सकिन्छ? के उमेर मा एक महिला यस्तो हुन मानिन्छ? म इतिहास मा एक सानो अन्तरदृष्टि आश्चर्य र यो अवधारणा को समय फ्रेम सारे र परिवर्तन कसरी ट्र्याक गर्न।
धेरै शताब्दीयौंदेखि पहिले,
धेरै शताब्दीयौंदेखि पहिले, पहिलो menstrual अवधि को शुरुवात संग एक केटी जन्म दिन तयार मानिन्छ। यो किनभने समय मान्छे पूर्ण पालना प्रकृति मा, अचम्मको छैन। केटी "महिला दिन" गर्न सुरु भने, त्यो डर बिना आमा बन्न सक्थे।
यो मुसलमान देशहरूको टाढाको गाउँमा, यो प्रवृत्ति अहिले सम्म जारी छ भन्दै लायक छ। त्यहाँ बालिका पत्नीहरू बन्न र 15 वर्ष जन्म दिन हो।
पुरानो दिनमा उमेर starorodyaschimi महिला - 20 वर्ष र माथि। एक केटी विवाह छैन र उमेर अघि बच्चा जन्म दिए भने, यो एक spinster छलफल भएको थियो। यो किन छ? यो कुरा केवल जवान र स्वस्थ व्यक्तिगत महिला स्वस्थ छोराछोरी जन्माउन सक्नुहुन्छ। र समयमा चिकित्सा को स्तर एकदम कम थियो र सबैका लागि उपलब्ध छ रूपमा, महिला हार्ड, आफ्नो शरीर चाँडै थाक्नु, काम स्वास्थ्य त्यसपछि हराएको छ बच्चाहरु भइरहेको लागि उमेर एकदम आजको स्तरअनुसार कम थियो।
त्यसैले starorodyaschimi। के उमेर मा एक महिला जस्तै विचार गर्नुपर्छ? पछिल्लो शताब्दीको मध्य लागि जाँदा, सोभियत संघ, को महिला जन्म 25 वर्ष पछि दिनुभयो, अप्रिय भन्ने नाम लगाउँथे। यस समयमा चिकित्सा को स्तर महिला आफू र आफ्नो स्वास्थ्य पछि हेर्नु, एकदम गुलाब, तर मान्छे को चेतना त परिवर्तन गर्न सजिलो थिएन। गाउँमा र साना शहरहरूमा बस्ने सबै गणराज्यहरु को मान्छे को थोक। र त्यहाँ अझै पनि छ महिला यो बस राख्न, एकाइ, तर अझै पनि थप काम चूल्हा को keeper भन्दा विचार लिएको थियो - एक गृहिणी। त्यसैले, एक लामो समय को लागि स्कूल पछि बालिका consciously intermarried र तुरुन्तै छोराछोरीलाई जन्म दिए। र लेट भएकाहरूलाई, र भनिन्छ starorodyaschimi। अचम्मको कुरा, शब्द 25 वर्ष पछि जन्म दिए जो महिलाहरु को लागि सक्रिय चिकित्सकहरु प्रयोग।
पछिल्लो शताब्दीमा र वर्तमान को अन्त
हामी समय फ्रेम र कसरी परिमार्जन शब्द "starorodyaschimi" कसरी परिवर्तन गर्न थप विचार गर्नुहोस्। के उमेर मा एक महिला जस्तै पछिल्लो शताब्दीको अन्त मा विचार गर्नुपर्छ? चिकित्सा एक तीव्र गति विकसित गरेको छ देखि, आदर्श उमेर बच्चालाई जन्म 18-22 वर्ष र 20-25 वर्ष छैन मानिन्थ्यो। Starorodyaschimi पनि 30 आज पछि गर्भावस्था निर्णय गर्ने महिलाहरु विश्व चिकित्सा शब्द अवस्थित छैन भनिन्छ। तथापि, पोस्ट-सोभियत देशहरुमा दैनिक जीवनमा, यो एक लामो समय को लागि रहनेछ।
एक महिला डाक्टर गर्न प्रश्न सोध्न भने: "के उमेर मा starorodyaschimi expectant आमा मानिन्छ?" - डाक्टर जवाफ छ: "कुनै एक"। ई त्यस्तो आधुनिक चिकित्सा अवधि बस अवस्थित छैन। उहाँले नयाँ अवधारणा बदलिएको थियो - "। Nulliparous उमेर" यो जो कोहीले अपमान गर्न गर्न मुख्यतया गरेको थियो र आफ्नो अधिकार उल्लंघन छैन। उमेर छलफल nulliparous महिला 35 वर्ष पछि पहिलो पटक बच्चालाई जन्म दिन निर्णय गर्ने। तर, यो चिकित्सा को दुनिया हैरानी कि गरिनेछ र प्रसब 40. मा अनि कुरा आज वैज्ञानिकहरू को उपलब्धिहरू धन्यवाद, महिला आफ्नो स्वास्थ्य उत्कृष्ट अवस्थामा सकेसम्म लामो समयसम्म सुरक्षित गर्न सक्ने छ भने गर्नुपर्छ। त्यसैले, पछि 40 आज सम्भव जन्म दिन। तथापि, सबै डाक्टर यो पहिलो गर्भावस्था को समय ढिलाइ गर्न आवश्यक छैन भन्छन्।
मुख्य कारण बारे एक सानो
त्यसैले हामी के उमेर starorodyaschimi महिला मानिन्छ देखि, बुझे - पछि 35 (भविष्यमा आमा आदर हुनत अवधि लागू छैन एकदम सही हो)। म एक शताब्दीको अन्तिम क्वाटरमा एकदम जन्म छोराछोरीलाई 30 वर्ष पछि दिन जो महिलाहरु को संख्या बढेको छ भनी पनि भन्न चाहन्छु। यो प्रवृत्ति जीवनको आफ्नो बाटो को रूप मा, पश्चिम हामीलाई आए तर। आज, महिलाहरु Housewives हुन र केवल घरेलू घरधन्दा र छोराछोरी सामना चाहँदैनन्। महिला आत्म-पूरा जान्न, मानिसहरू सँगसँगै काम र अक्सर बलियो सेक्स भन्दा बढी आय प्राप्त। यो सबै एक पटक त सन्तान जन्म लागि समय फ्रेम धक्का, केही मन र घरेलू महिलाहरु परिवर्तन भयो।
किन झन् शब्द "starorodjashchaja महिला" मा रूसी प्रसूति अस्पताल सुन्न छन्? यो एकदम धेरै लागि कारण।
अक्सर युवा वा किशोरावस्था पहिलो गर्भपतन मा आनाकानी, र त्यसपछि बालिका एक लामो समय को लागि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्दैन। मा सबै भन्दा राम्रो, यो तिनीहरूले एक एकदम लामो उपचार पछि यो छ बाहिर जान्छ र एक टुकडा गर्भ धारण गर्ने प्रयासहरू।
अक्सर महिला एक क्यारियर बनाउन र भविष्य सुरक्षित गर्न, र त्यसपछि मात्र बच्चा जन्म दिन पहिलो स्थानमा चाहन्छ।
अक्सर starorodyaschimi महिला पुन विवाह को मामला मा छन्। ई नयाँ मानिस महिला पनि बच्चा दिन चाहनुहुन्छ।
लामो समय को लागि महिला पतिको खोज र नजन्मेको बच्चाको पिता हुँदा त्यहाँ परिस्थिति हुन सक्छ। उहाँले उहाँबाट, 35 वर्ष पछि यो पाता र जन्म दिन्छ।
अर्को कारण - महिला दीर्घकालीन उपचार। यो त पहिलो बच्चा बस ग्रस्त र एक उच्च शक्ति माग्छु एउटा महिला भएको हुन्छ। र यो केवल 35 वर्ष पछि एक बच्चा मां गर्भ धारण गर्दछ।
तपाईं अझै पनि किन महिला starorodyaschimi हुन निर्णय कारण एक ठूलो संख्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तथापि, तिनीहरू सबै एक इच्छा द्वारा एकताबद्ध छन्: कुनै पनि लागत मा एउटा सुन्दर र स्वस्थ बच्चा जन्म दिन।
होने "महिला starorodjashchaja" को धारणा संग व्यवहार गर्नुभयो कसरी पुरानो यस्तो हुन मानिन्छ, हामी पनि यस्तो कार्यहरू मुख्य लाभ हाइलाइट गर्नुपर्छ। यसरी, पहिलो र सबै भन्दा विशाल प्लस - गर्भवती को लगभग 100% जानीबुझी यी महिलाहरु। यस्तो मामला मा जन्म भएका ई शिशु, तिनीहरूले एक बोझ वा तथाकथित छैनन्, सधैं स्वागत र आफ्नो आमाबाबुको प्रेम हो "युवा को त्रुटि।" साथै, त्यतिबेला आमाबाबुले जीवन अनुभव को एक धन र बच्चा सिकाउन सक्छ। त्यसैले, परिवार समाज को अर्को उपयोगी सदस्य उठ्छ। अर्को प्लस पछि प्रसब: डाक्टर दृश्य को एक शारीरिक बिन्दु एक बच्चाको लागि आदर्श उमेर भन्न भने - 22 वर्ष, को मनोवैज्ञानिक त्यसपछि आफ्नो नम्बर भनिन्छ। विशेषज्ञहरु कला मा भन्न कि भावनात्मक, दस वर्ष पछि लागि सन्तान उद्भव लागि तयार 32-35 वर्ष आसपास महिला। र अर्को प्लस: परिपक्व महिलाहरु धेरै गम्भीर गर्भावस्था को योजना हो - को प्रिपेरेटरी चरण, सधैं gestation को अवधिमा डाक्टर र चिकित्सकहरु को सिफारिसहरू पालन र crumbs सधैं आमा बन्न आफ्नो निर्णय मा सचेत छन्।
लेट वितरण अन्य सकारात्मक पक्षहरू
अर्को कारण महिला आफूलाई "starorodyaschimi" श्रेणी (जस्तै के उमेर महिलाहरु मानिन्छ, हामी पहिले नै बाहिर समझ छ मा) गर्न वर्गीकरण गर्न डराउनु पर्दैन?
गर्भावस्था र प्रसब को अवधि एकदम शरीर rejuvenates। सकारात्मक शरीर महिलाहरु असर विशिष्ट हर्मोन को विकास मा सबै कुरा (बारेमा 35 वर्ष पुरानो महिलाहरु प्रजनन समारोह फीका थाल्छ, र यो गर्भावस्था prolongs)।
starorodyaschimi आमा अन्य "महिला शरद ऋतु", अर्थात्। ई रजोनिवृत्ति पछि आउँछ। यो महिला एक महिला अब र सामान्य भन्दा पछि छ कि पुरानो महिला आफूलाई कल गर्न सक्छ।
वैज्ञानिकहरूले देर वितरण, रक्त कोलेस्ट्रल को स्तर कम osteoporosis र हृदय रोगको खतरा कम भन्छन्।
लेट गर्भावस्था यस्तो धूम्रपान र रक्सी सेवन खराब बानी परित्याग (कि आफ्नै र एक धेरै, धेरै बाह्य कारक बिना कठिन बनाउन) गर्न महिला गराउँछ।
महिला starorodjashchaja। यो यस्तो कुनै विचार हुनेछ कति वर्ष, हामी प्रयोग अवधि युरोपेली Medpraktika मा स्वीकार्य छैन सम्झन। तथापि, लेट गर्भावस्था र प्रसब खतरनाक हुन सक्छ।
एक महिलाको शरीर को 35 वर्ष पछि अब बच्चा वृद्धि र विकासको लागि त आवश्यक छ जो क्याल्सियम, अवशोषित गर्न सक्षम छ। यो एउटा गम्भीर समस्या बन्न सक्छ।
को एक बच्चा को 35 वर्ष महिलाहरु शरीर पछि जन्म लागि पूर्ण स्वस्थ हुनुपर्छ। र यो हरेक महिला मा निहित छ।
35 वर्ष पछि अस्थानिक गर्भावस्था को जोखिम बढ्छ।
Starorodyaschimi जवान महिला भन्दा बढी संभावना छ, आफ्नो सन्तानलाई विभिन्न आनुवंशिक र प्रसारित chromosomal विकार।
तथ्याङ्क संग जन्मेका सबै बच्चाहरु को बारे मा 70% भन्न डाउन सिन्ड्रोम दुनिया starorodyaschimi आमा नेतृत्व गरेका छन्।
महिला मा, गर्भावस्था को समयमा 35 वर्ष पछि अक्सर विभिन्न जटिलताहरू अनुभव। यो preterm वा छन् पोस्ट-अवधि गर्भावस्था, preeclampsia (लेट को toxemia), कमजोर श्रम।
Starorodyaschimi महिलाहरु प्राय सामान्य भन्दा सीजेरियन खण्ड द्वारा बच्चाहरु जन्म दिन।
अक्सर बच्चाहरु गर्भमा को 35 वर्ष पछि आमा hypoxia प्रभावित छन्।
महिला मा जो postpartum अवधिमा सामान्य समस्या भन्दा छिटो लेट वितरण, मा निर्णय गरेका छौं। यो आक्रान्त, फरक संक्रमण छ।
संसारमा त्यहाँ धेरै रोचक र असामान्य starorodyaschimi छ। आफ्नो उमेर - राम्रो परे 50 वर्ष! र, जबकि महिला उत्कृष्ट आमा आफ्नो crumbs बनाउन व्यवस्थित छन्।
सुजन Tollefsen, 57 वर्ष पुरानो। महिला एक रूसी क्लिनिक मा दीर्घकालीन उपचार पछि 2008 मा उनको पहिलो बच्चा, एक बच्चा Frey, जन्म दिए।
Lizzie युद्ध, 60 वर्ष पुरानो। त्यो आफ्नो 41 वर्षीय प्रेमी (तथापि, महिला पछि resigned गर्ने) एक केटा जन्म दिए। क्लिनिक मा, उनले 49 थियो।
Rajo देवी, 70 वर्ष पुरानो। 72 वर्षीया किसान को पत्नी गर्भवती प्राप्त गर्न 50 वर्ष को लागि प्रयास। त्यो 2008 मा उमेर मात्र 70 वर्ष छ सम्भव थियो। बेबी कृत्रिम गर्भाधान मार्फत थियो।
एड्रियन Illesku, 66 वर्ष पुरानो। पूर्व शिक्षक कृत्रिम गर्भाधान मार्फत 2008 मा उनको बच्चा जन्म दिए। Ovum र शुक्राणु पनि दाताहरुलाई थिए।
Patrisiya Rashbruk, 62 वर्ष पुरानो। पीएचडी, एक बाल मनोवैज्ञानिक, प्याट्रिसिया जन्म उनको बच्चाहरु को 2006 मा कृत्रिम मल मा पाँचौ प्रयास पछि दिनुभयो। त्यो पहिले नै बच्चाहरु छ, तर त्यो सरोष बच्चालाई आफ्नो दोस्रो पत्नी दिन चाहन्थे।
एक दवादारू रूपमा Inula। हर्बल चाय र tinctures व्यञ्जन। महिनावारी एक ढिलाइ मा Inula
1 औंला लागि ग्रीवा dilatation। पहिले श्रम cervix: चरणमा, सर्तहरू
विस्तृत-brimmed टोपी - एक स्टाइलिश, आधुनिक, मूल
फाइलोन चित्रकारीका तत्वहरू। टेक्नोलोजी चित्रकारी Philemon खिलौना
को मास्को मेट्रो को इतिहास: मेट्रो Chkalovskaya